Resadresaka nifanaovana tamin'i Eugenia Bahit | Avy amin'ny Linux
Resadresaka nifanaovana tamin'i Eugenia Bahit
Mitondra tafatafa aminao aho izay notontosain'ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny olona ho an'ny malalantsika Eugenia bahit. Aza hadino izany:
Nosoratan'i: Carlos Osiel Rojas Velázquez
Faly be aho afaka tafatafa amin'ny iray amin'ireo olona nanamora ny fivezivezena rindrambaiko maimaimpoana hitombo eto amin'izao tontolo izao. Miresaka aho Eugenia bahit, GLAMP mpanao mari-trano sy Agile Coach amin'izao fotoana izao, mpikambana ao amin'ny Free Software Foundation ary mpikambana ao amin'ny ekipa Mpijirika Debian, mpitantana tetik'asa Gazety hackers & Developers. Manantena aho fa nankafizinao io tafatafa io.
1 Ahoana no nanombohanao namolavola fampiharana maimaim-poana?
2 Midika inona aminao ny rindrambaiko maimaimpoana?
3 Inona ny tolo-kevitra hataonao amin'ireo vaovao amin'ny tontolon'ny fampandrosoana rindrambaiko?
4 Anekdota sasany mifandraika amin'ny fampivoarana rindrambaiko maimaimpoana.
5 Ahoana ny fahatsapanao ho mpikambana ao amin'ny Free Software Foundation?
6 Lazao anay ny zavatra niainanao amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny hacker an'i Debian anao.
7 Ahoana no nahatonga ny fandraisana an-tanana ny hackers & Developers magazine?
8 Lazao anay kely momba ny asanao matihanina eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Ahoana no nanombohanao namolavola fampiharana maimaim-poana?
raha ny marina Mihevitra aho fa tsy afaka manavaka ny fanombohana amin'ny maha developer ny rindranasa eo anelanelan'ny mpamorona rindranasa maimaimpoana sy maimaim-poana. Izaho Namolavola rindrambaiko foana aho ary nizara an-kalalahana amin'ny olona rehetra na dia tsy mahalala akory ny fisian'ny terminolojia aza "rindrambaiko maimaimpoana".
Ary tsy nanao zavatra manokana izy. Inona no fantatro fa nitaiza ahy toy izany angamba izy ireo. Miaraka amin'izany "Amin'ny fiainana dia mila mizara ny zava-drehetra ianao". Angamba zavatra avy amiko tsy fanao fotsiny io fa heveriko fa ampahany amin'ny votoatin'ny tsirairay izany. Nihevitra ianao fa tena mbola tanora aho tamin'ny nanombohako namolavola rindranasa.
18 aho tamin'izay "ny taonjato farany" (ary tsia, tsy toa an'i Brad Pitt aho amin'ny tafatafa miaraka amin'i Vampire! Efa antitra aho tsy xD intsony). Tamin'ny 1996 izany ary tsy nieritreritra akory hoe hanokan-tena ho matihanina aho. Tamin'izany fotoana izany sy hatramin'ny faha-14 taonany, Natokana ho an'ny mozika aho, Zazavavy mpihira aho ary "drummer" sesista ary nanao fivelomana tamin'ny fanomezana lesona manokana momba ny amponga sy ny valiha Inona no ho eritreretiko fa ny fialamboliko dia tsy ny computing fa ny mozika ary ny tena asako dia "mikosoka"? Tsy nieritreritra an'io akory aho tamin'ny 18!
Avy eo rehefa nanjary asa matihanina (tokony ho 2 taona taty aoriana), efa miasa ho an'ny mpanjifa izay manana orinasa, nanao azy ireo "palitao sy mamatotra" ary tsy nanana volo na tatoazy lava xD, tao no nahafantarako ny momba ny lisansa sy ireo "zavatra adala".
Tsy fantatro ny fisian'ny rindrambaiko maimaimpoana, ka tamin'ny fotoana nilazako tamin'ny mpisolovava tamin'ny fianarako hoe: "Ao amin'ny fahazoan-dàlana hampiasana fa manan-kery mandritra ny 99 taona azo havaozina ho azy amin'ny vanim-potoana mitovy izy fa tsy mila manao sonia fifanarahana hafa na fandoavam-bola isan-karazany ary ny rindrambaiko rehetra dia atolotra miaraka amina kaody loharano hahafahana manova sy mametraka azy betsaka ny solosaina ilaina. Fa raha mila ahy hanao ny fanovana izy ireo, omeo fanampiana ara-teknika izy ireo aorian'ny faha-6 volana nahazoana ny lozisialy na serivisy fikaonan-doha IT hafa, dia tsy maintsy mangataka teny nalaina tamiko izy ireo ”.
Tsy nahafantatra na inona na inona izy ireo tao amin'ny biraon'ny lalàna. Nanakarama ny orinasam-pitsarana lehibe indrindra aho (manam-pahaizana manokana momba ny lalàna momba ny solosaina sy ny fananana ara-tsaina) any Amerika Latina, mitovy amin'ny amin'ity faritra ity, ireo orinasa toa an'i Microsoft, Adobe ary Macromedia dia nanakarama tamin'io fotoana io - izay tsy mbola avy amin'ny Adobe -. Nahazo ny harena aho. Saingy tsy nanana safidy hafa aho. Ny mpanjifa dia nitaky ny fahazoan-dàlana, ary tsy azoko hoe inona no resahin'izy ireo.
Saingy nazava be aho fa te hiaina amin'ny fampandrosoana ny lozisialy fa tsy avy amin'ny "Manaova fifanarahana"Raha tsy izany dia nanokana ny tenako ho amin'ny lalàna sy politika aho ary ho mpanao lalàna. Ny zava-misy fa tsy maintsy nandoa ahy in-100 ho an'io fivoarana io izy ireo dia toy ny nanome ahy fampidiran-drano fisotro ho takalon'ny fanalana ny adrenalinako rehetra. Tsy niteraka na inona na inona ho ahy izany! Y Te hiala voly aho, Liana tamin'ny diosy 3 aho mba hahazoana vola. Nilaiko izany mba hanomezana sakafo ara-dalàna ahy sy hanampiana ny fianakaviako satria tao an-tranoko dia tsy nanam-bola izahay. Ny reniko dia nisotro ronono niaraka tamin'ny ambany indrindra ary ny raiko dia nanana fivarotam-boky izay vao nikatona noho ny krizy.
Amin'izay fotoana izay, nampiasa teknolojia an-trano toy ny ASP 3.0 sy Visual Basic ihany koa izy (Mbola tsy nisy ny "basophy" .Net) ary rehefa tonga ny fotoana hanomezana alalana an'ity karazana rindrambaiko ity dia hitako fa tsy afaka aho. Izay "Microsoft" tsy nomeny alalana aho satria raha te hobnob ao amin'ny VB dia nampiasa rindrambaiko izay azon'ny mpiara-miasa tamiko tany amin'ny University aho miaraka amin'ny fahazoan-dàlana "Mpianatra" ($ 1 izany, izay eto ny vidin'ny fonosana vatomamy). Zatra C sy Perl aho ary niaraka tamin'ity avy amin'ny Microsoft ity, I "Cabrié"Nanao psychotic adala aho sns Nanjary nahalala rindrambaiko maimaimpoana aho tamin'ny farany. Fa nihaona taminy aho "Amin'ny maha mpampiasa anao", tsy amin'ny maha programmer anao. Fa maninona Izaho dia efa namorona rindrambaiko niaraka tamin'io filozofia io tamin'ny tsipika kaody voalohany.
Midika inona aminao ny rindrambaiko maimaimpoana?
Giant. FAHAFAHANA, toa kely ve izany? 4 taona aho tamin'izaho nanao “kabary” tamin'ny mpampianatra kilasimandry momba ny fahalalahana satria tsy tiako noterena hilalao, hatory na hanao sary. Izy io dia zavatra entina ao anaty ra. Na manana fanahy libertarian ianao na tsia. Tsy resaka labels no resahina. Fanontaniana momba ny fanahy sy ny maha-izy azy io.
Fomba fiainana tsotra izany fa amin'ny lafiny ankapobeny. Ho an'ireo izay tsy manana izany toe-tsaina libertarian izany dia hitan'ny Free Software ho toy ny Rindrambaiko Maimaimpoana izany. Saingy tsy misy ifandraisany amin'ny vidiny ny fahalalahana. Tsy haiko hoe maninona ny olona no mampifangaro ny fahalalahana amin'ny vidiny. Gadra iray mivoaka ny fonja ary afaka. Tany ampovoany dia namono olona tamin'ny antsy nomeny azy izy, hahahaha, fa matotra, inona no ifandraisan'ny fahalalahana amin'ny vidin'ny zavatra? Any! Diso ny olona ny pomade volontsôkôla ho an'i dulce de leche.
Ny fananana loko mitovy amin'izany dia tsy midika hoe mitovy izy ireo, mainka fa ny tsirony mitovy. Ary ny rindrambaiko maimaimpoana dia momba ny fahalalahana. Ary izaho, faly fotsiny aho fa afaka. Raha tsy afaka aho dia tsy afaka ny ho faly. Ka ny rindrambaiko maimaim-poana, miasa amin'io dia midika ho ahy rehetra. Maneho ny 70% amin'ny fiainako izany raha tsy mihoatra izany.
Inona ny tolo-kevitra hataonao amin'ireo vaovao amin'ny tontolon'ny fampandrosoana rindrambaiko?
Ilay zavatra hatolotro anao amin'ny olona rehetra, na dia te-hanomboka amin'ny tontolon'ny globology aza izy ireo.
Fanetren-tena: hiampitana ny sakana amin'ny fahalalana ary handeha amin'ny lalan'ny fahendrena, satria tsy mitovy ny fahalalana sy ny fahalalana. Ny mahalala mahalala ny fetra. Fa ny hendry mahay mandalo azy ireo.
Fitiavan-tena tompon'andraikitra: mba tsy hianjera amin'ny fahakingan'ny fifaninanana jamban'ny fahakiviana amin'ny tsy fahombiazan'ny tena ary hifantoka amin'ny fanatsarana ny tena fotsiny.
Will: mametraka tanjona ary miasa mba hahatratrarana azy.
Ary ambonin'izany rehetra izany, ny fahalalahana. Satria raha tsy misy an'io dia tsy misy azo atao na iray aza amin'ireo telo etsy ambony.
Anekdota sasany mifandraika amin'ny fampivoarana rindrambaiko maimaimpoana.
Arivo? hahaha, maro, azo antoka. Ny farany indrindra dia izay mahamenatra ahy kely nefa miaraka amin'izay dia manome aingam-panahy ahy amin'ny "fitiavana" iray. Vao tsy ela akory izay, ho an'ny Magazine Hackers & Developers manokana faran'ny taona dia nanao resadresaka an-tariby niaraka tamin'i Richard Stallman aho. Tamin'ny alàlan'ny mailaka dia nomeny ahy ny findainy. Fantatro fa tsy nampiasa telefaona finday izy ka tsy fantatro hoe iza no hamaly ilay antso.
Namaky teny anglisy tsara aho, saingy amin'ny fiteny miteraka fandavana, tsy miteny izany aho. Karazana Tarzan miteny anglisy aho. Avy eo 10 minitra talohan'ny niantsoako an'i Stallman, satria mankafy azy amin'ny fomba tsy tiako mihitsy aho, dia voan'ny aretin-kozatra toy ny hoe handeha hiaraka amin'i Chris Cornell aho - mihoatra izany. Fanontaniana fa tonga ny fotoana ary niantso azy aho. Ny feon'ny lehilahy iray dia mamaly ahy ary miteny amin'ny teny anglisy tonga lafatra: "Salama." Ary valiako hoe: “jé-lou. Mai neimmm dia Eu-ge-nia Bait… ”.
Manelingelina ahy ilay lehilahy ary miteny, amin'ny teny espaniola tonga lafatra: “Salama Eugenia, manao ahoana ianao? Fahafinaretana miresaka aminao ". Saika torana aho ary tamin'ny fientanam-po dia nanomboka "nikiakiaka" izay zatovo tao amin'ny fitantaran'i Bon Jovi fony mbola lava volo izy: "Ay! Richard! Salama! Sonenika aho! Ah! Mampientam-po izaitsizy! Ah! Tsy mahay miteny aho !!! " ary i Stallman miaraka amin'ny faharetany feno fanetren-tena dia mamaly ahy ... "tsara ... tsara." Tamin'izany rehetra izany dia hitako fa raha mihetsi-po be loatra aho, dia mitomany ny ranomasoko toy ny hoe mitomany aho, fa tsy mitomany noho ny alahelo. Hafahafa sy hafahafa izany! Na izany na tsy izany ... aleo hazavaina fa efa ho 40 taona aho fa tsy 15 taona!
Ahoana ny fahatsapanao ho mpikambana ao amin'ny Free Software Foundation?
Fiavonavonana sy fahafinaretana amin'ny fananana toerana iray izay ahatsapanao fa misy anao. Hery hananana ny fanoloran-tena ho mahatoky amin'ireo foto-pitsipikao amin'ny fahitsiana, fahasahiana ary ambonin'izany rehetra izany, miaraka amin'ny andraikitra.
Lazao anay ny zavatra niainanao amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny hacker an'i Debian anao.
Eny ary, Mpijirika Debian Heveriko fa maro ny olona mihevitra azy io ho toy ny vondrona mpijirika tsy fantatra anarana. Marina ny filazan'izy ireo fa vondron'olona very saina izahay, saingy diso ny mampitaha anay amin'ireo lazaina fa hackers any Hollywood. Raha ny tokony ho izy dia mitovy amin'ny olona adala amin'ny sarimihetsika mampatahotra Scary Movie izahay, hahaha Ny "hood" tsy mahomby antsika! Mahatsiaro tena isika !!
Miaraka amin'i Dabo, iza no nanasa ahy tany am-boalohany hanatevin-daharana ilay tetik'asa sy izay matetika miresaka matetika aminay, dia nandany adiny 8 nifampiresahana tamin'ny resadresaka an-telefaona na inona na inona hadalana (mazava ho azy fa ny hadalana amin'ny solosaina mifangaro amin'ny lohahevitra toa ny tsy fahafatesan'ny foza sy ny fisiana unicorn manga manana elatra). Vondrona tena tsara izy io. Ankafiziko daholo izy ireo ary mianatra zavatra betsaka avy amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Ny lahatsoratra bilaogy tsirairay, ny mailaka tsirairay izay takalozantsika, na toy inona na halavany dia fomba iray hitomboana sy hianarana. Ankoatr'izay, isika rehetra dia mpinamana be amin'ny tena hevitr'ilay teny.
Para "Any ivelany" (Araka ny voalazantsika eto), jereo fotsiny ireo lahatsoratra bilaogy iray na roa hamakiana ireo fanehoan-kevitra ary hahatsapa ny firaisankina lehibe misy ao amin'ny vondrona. Heveriko fa anisan'ny mpijirika an'i Debian no iray amin'ireo zavatra nampientana ahy indrindra teo amin'ny fiainako. Heveriko fa amin'ny lafiny maro dia tsy mitovy amin'ny ekipa hafa isika. Ohatra, tsy hahita ny tenanao ianao amin'ny adihevitra lava momba ireo izay tsy mitarika na inona na inona (izay, raha tsy matahotra ny fanehoako ianao dia holazaiko aminao fa ireo karazana adihevitra mahazatra momba ny tontolo iainana malalaka rindrambaiko sy computing amin'ny ankapobeny, antsoiko hoe "filomasturbates." Raha ny marina, tsy zakako ny "filozofia" mandritra ny andro maro amin'ny lohahevitra izay, na dia mahaliana aza izy ireo, dia tsy mamokatra na mandray anjara. Amin'izay lafiny izay, maika loatra aho miaraka amin'ny hevitro).
Mino aho fa samy nanana ny heviny miharihary ny tsirairay (satria mbola tsy niresaka momba izany isika), faritra iray ifantohan'izy ireo. Dabo, ohatra, dia tena mifandraika amin'ny zava-drehetra izay marefo amin'ny lozisialy sy ny lozisialy. Raha vantany vao fantatra ny lavaka fandriam-pahalemana dia efa nilaza izany taminao ilay tovolahy alohan'ny hahalalan'ny olona azy sy hanome sosokevitra azy ireo. Tony kokoa i Diego fa andrana kokoa. Toy ny amin'izao fotoana izao dia tsy tsapanao izany, fa rehefa manao jery todika ianao dia mahatsapa fa miaina miaina zavatra ilay lehilahy mahia. Debish (Angel) dia manana talenta mahavariana. Sahala amin'ny somary somary saro-kenatra kokoa io, fa toy ny saro-kenatra rehetra, rehefa misy ny hevitra natsangana dia mamoaka lahatsoratra mamela anao hisokatra ny vavanao. Ahoana no tsy hianaranao amin'ny olona toa izany? Ary farany nefa tsy farany, mahafatifaty izy ireo. Olona lehibe, nefa tena. Tsy fomba fitenenana izany. Izy ireo dia. Olona tsara izy ireo ary, indrindra eo amin'ny tontolon'ny solosaina, dia tsy ho hitanao eo akaiky eo izany.
Ahoana no nahatonga ny fandraisana an-tanana ny hackers & Developers magazine?
Fanontaniana sarotra izany. Andao jerena ... lava (lava be) ny manazava sy mamintina fa tsy ara-drariny. Sfanentanana avy amin'ny traikefa manokana sy traikefa manokana izay tsy maintsy nandalovako, tao anatin'ny 20 taona lasa teo amin'ny fiainako.
Manelingelina ahy izany rehefa mamaky amin'ny bilaogy na fanehoan-kevitra amin'ny tambajotra sosialy aho "Magazine an'ny hackers & Developers dia magazine namboarin'ny vehivavy". Satria mampihatra ny anjara asako amin'ny maha-vehivavy ahy amin'ny sehatry ny fiainako manokana aho. Ary tsy "vondron-behivavy" isika, fa vondron'ireo PROFESIONALIA. Ankoatr'izay, tsy mandeha lavitra intsony, ny iray amin'ireo matihanina izay miara-miasa amin'ny magazine, Sergio, dia lehilahy lahy.
Na dia talohan'ny nivoahan'ny gazety aza, Izaho dia tao amin'ny Python Argentina. Tamin'ny PyCamp farany natao tamin'ny Jolay tamin'ny taon-dasa, ny Python Software Foundation dia nanome vola 50% amin'ny fijanonana isan'andro "ho an'ny vehivavy".
Nanaiky ilay fanomezana aho satria, tena tsy afaka nandoa ny zava-drehetra aho. Saingy amin'ireo "vehivavy" rehetra ao amin'ny PyCamp (6 heveriko), ny 2 ihany no mpandahatra fandaharana Python. Ny ambiny zazavavy dia teo mba hanomezam-boninahitra ny fandalinana ny ray mendrika ny aretin-tsaina, Don Sigmund Freud. Manampy an'izay, ny rivotra iainan'ny PyCamp, tsy dia tiako izany. Falopa, divay, labiera ... Vehivavy lehibe aho. Tsy an'ny adala aho. Nandeha tany amin'ny kiho aho ary amin'ireo olona am-polony izay teo, dia namonjy ilay 3 na 4 toy ny mahazatra foana aho.
Ary izany, heveriko fa no nahatonga ny hackers & Developers Magazine hipoitra.. Tahaka ny fikafika rehetra, nanambara toe-javatra am-polony hafa izy: ny PyConAr (fihaonambe Python izay atao manerantany) dia ho avy ary - raha tadidiko tsara - lahateny 180 dia ny ahy irery no tolo-kevitra natolotry ny vehivavy iray. ? Notohizako foana hoe: UbuConLA ho avy any Arzantina ary handeha aho. Manao raffle izy ireo amin'ny faran'ny fihaonambe, ho an'ny T-shirt sasany ary ny varotra sasany. Nisy T-shirt kely (habe S, misy tapa-dehilahy) ary satria kely ho an'ny vatan-dehilahy, dia nanapa-kevitra ny hamorona azy ireo amin'ny vehivavy izy ireo. Manontany izay izy ireo "Ahoana ny fomba fametrahana rindrambaiko ao Ubuntu?". Mazava ho azy fa nihomehy aho. Tsy hampindrana ny tenako amin'ny hadalana toy izany aho (ary ambonin'izany rehetra izany, ny akanjo lava misy ny volon'ny lehilahy dia tsy mety amiko akory hatao takelaka) ary henoko ny zazavavy mamaly "Miaraka amin'ny fametrahana apt-get" ary inona no nataon'ny "Andriamatoa solontenan'ny UbuConLA"? "Vehivavy izy ary mahay mametraka rindrambaiko amin'ny alàlan'ny console, mendrika ny lobaka izy". Raha manana fahazoan-dàlana hitondra fitaovam-piadiana aho, amin'izao fotoana izao dia nanoratra taminao avy tany am-ponja tao anatin'ny sela fiarovana lehibe aho.
Ary andinindininy fotsiny ireo fa tsy mitaky na inona na inona ny fitokana-monina. Fa toy ireo, an'arivony. Ary nanatevin-daharana izy rehetra. Satria misy zavatra tsy azo lavina ary izany dia i Amerika Latina no miala amin'ny lafiny mifandraika amin'ny zon'olombelona, ​​ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ary ny fotoana mety. Any Arzantina, vao tsy ela akory izay, dia nanao fandrosoana lehibe isika tamin'io lafiny io. Fa raha mandanjalanja amin'ny ankapobeny ianao, mampiditra an'i Arzantina amin'ny sisa any Amerika Latina, dia manohy manao amboletra ara-kolontsaina isika rehetra "tsara sy ratsy", "Vehivavy manasa lovia, ny lehilahy mijery ny borikin'ny vehivavy manasa lovia" ary noho izany. Nefa resy lahatra aho fa ny fahafaha-manao, ny olona iray dia tokony hahalala ny fomba hitadiavana azy ireo, ny iray dia mila mivoaka amin'ny hadalana amin'ny fampiasana sy fomba amam-panao ary ny iray no tokony hanome ny tenany ny fotoana tadiaviny.
Ka ny hevitro dia hoe: manaova zavatra misy kalitao, ataon'ny matihanina marina izay manampy ahy hanaparitaka fahalalana sy hiteraka fotoana mety mbola tsy misy ary ny mivoaka irery no Magazine hackers & Developers. Ny ambiny manavaka (tsara na ratsy). Satria ny fanaovana "Hackathon ho an'ny vehivavy" dia tsy manome fotoana mitovy. Manao zavatra ho an'ny matihanina aho ary zavatra telo no tadiaviko raha lehilahy, vehivavy, pelaka, lesbiana, transvestites, transsexuals, transvestites, fotsy hoditra, mainty, latino, eropeana, katolika, jiosy na tsy mino an'Andriamanitra ... amin'ny olona, matihanina sy manokana, ny tiako, manaja, manome lanja sy mankasitraka ahy ny zavatra ao anatiny. Ny ambiny, tsy hitako akory. Tsy maninona aho raha maniry ny Shabbat Shalom na Krismasy sambatra aho, firariana tsara sy fialamboly tsara ve izy ireo? Misaotra ary ary. Izay no lanjaiko ary no kasaiko haparitaka, ho fanampin'ny fahalalana, amin'ny alàlan'ny Magazine Hackers & Developers. Ka izay no namoronana azy
Lazao anay kely momba ny asanao matihanina eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Heveriko fa izay rehetra nolazaiko tamin'ny fanontaniana teo aloha dia mamaly betsaka an'io, ambonin'izany rehetra izany, satria sarotra amiko ny mizara ny làlan-kalehako mifantoka amin'ny Free Software. Manana asa matihanina aho na nisy ny rindrambaiko Maimaimpoana na tsia, dia hitovy izany. Satria araka ny noresahako fanontaniana roa teo aloha, ny fanontaniana momba ny fahalalahana, raha ny tenany, dia tsy misy ifandraisany amin'ilay matihanina: misy ifandraisany amin'ny fomba fiainana izany.
Tena ankasitrahako ny fiaraha-miasa amin'ny Eugenia Bahit amin'ny fanomezana ahy ny tafa sy dinika ary afaka mizara izany amin'ny vondrom-piarahamonina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Resadresaka nifanaovana tamin'i Eugenia Bahit
Wow mampahery tokoa.
Toy izany koa no antony tiako hanomezana zavatra lehibe amin'ny rindrambaiko, manomboka amin'ny slackware sy debian, avy eo amin'ny lalao video.
Amin'izao fotoana izao handinihana sy hametrahana fandraisana anjara kely: D.
Mahaliana ny teboka marobe lazainy ary tena tsara sy manao fampiharana amin'ny fotoana fahitany ny zavatra.
tsy mety dia hoy izy:
Tsy nahalala azy aho, fa toa "bacana", voajanahary, "tsy misy teny kely", mahafinaritra.
Mamaly amin'ny tsy fanarahan-dalàna
Wao!… Tiako ilay tovovavy mahia, ankoatry ny fahaizany mandanjalanja dia mahatsikaiky. Misaotra anao elav tamin'ny famoahana ilay tafatafa, izay ankoatry ny fialamboly dia tena maneho ny filozofia amin'ny fiainana mahafinaritra sy manabe ho an'ny maro.
Tsotra be hoy aho!
Saingy azo takarina tanteraka ary nizara tamim-pahatsorana ny zavatra niainany izy!
Joac dia hoy izy:
Ny lazainy momba ireo zazavavy nandeha tany amin'ny PyCamp dia ny tsy fanajana tanteraka, ary ny fihetsika izay tsy manampy mihitsy ka maro ny vehivavy no entanina handray anjara amin'ireo vondron'olona rindrambaiko malalaka. Ny tena marina dia, tsy mahafinaritra ny mamaky fa ny hetsika atosika sy tantanan'ny havokavoka tanteraka dia voatazona amin'izany fomba izany, voalamina mandrakariva miaraka amin'ny finiavana tsara indrindra.
Valiny tamin'i Joac
x-ip dia hoy izy:
Ny fomba niresahan'i Eugenia an'ireo zazavavy nandeha tany PyCamp dia toa mahery setra tamiko, nanampy izay heveriko ho lainga tanteraka rehefa nilaza izy fa "atmosfera falopa, divay ary labiera ...", manome sary diso tanteraka ny izany ilay hetsika. Loza mahatsiravina nataon'i Eugenia, nihevitra izy fa toeram-pitrandrahana mangatsiatsiaka, manantena aho fa afaka manohy manao izany ary tsy inona izany fa ny lesoka mety hitranga avy aminy na fanitarana. Toy izany koa, amin'ny tranga toy izany, mila miala tsiny ianao.
Mamaly amin'ny x-ip
Eny, izany no fomba niainany izany zavatra niainany izany, na dia toa sarotra toy inona aza ... Ho sary tsy marina amin'ilay hetsika, saingy hitany toy izany tamin'io fotoana io izy.
Johan dia hoy izy:
Great Eugenia, tena mendri-piderana ny fandraisany anjara sy ny fahatakarany ny tontolon'ny fampandrosoana rindrambaiko 🙂
Valiny tamin'i Johan
Debian Installer 7.0 Fanafahana kandidà 1 misy
Fanamafisana multi-core amin'ny Linux